Natiijada ka soo baxday baaritaankii Korona Fayras ee Kabtanka qaranka Spain, Sergio Busquets oo la shaaciyey & Haddii uu maanta xulka la safrayo – Gool FM
(Seville) 18 Juun 2021. Waxaa goordhow la shaaciyey natiijada ka soo baxday baartintaankii lagu sameeyey kabtanka qaranka Spain ee Sergio Busquets, kaasoo ku aaddanaa caabuqa Korona Fayras iyo haddii uu maanta xulka ula safrayo Seville.
Sergio Busquets ayaa ka soo kabsaday Korona Fayras, waxaana uu dib ugu soo laaban doonaa xulkiisa qaranka Spain.
Busquets ayaa laga waayey calaamadaha Korona Fayras kaddib baaritaannadii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey, waxaana uu dib ula midoobi doonaa xulkiisa qaranka Spain maanta oo Jimce ah.
Bayaan ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Spain oo lagu daabacay Website-ka xiriirka ayaa lagu sheegay in kabtanka xulka ee Sergio Busquets uu maanta oo Jimce ah ku soo biiri doono xulka isla markaana ula safri doono Magaalada Seville.
Sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in natiijada baaritaankii ka soo baxay tijaabadii PCR ee lagu sameeyey xiddiga xulka qaranka Catalan uu yahay mid aan looga helin xiddiga calaamado la xiriira caabuqa Kofid 19, isla markaana uu awoodo inuu qaranka dib ugu soo laabto saacadaha yar ee lagu soo aaddan.
Sergio Busquets ayaa la kulmi doona xiddigaha xulkiisa saacado ka hor inta aysan u safrin Magaalada Seville, halkaasoo uu xulka Spain kulankiisa labaad ee ciyaaraha Euro 2020 kula soo ciyaari doono dhiggiisa Poland.